IMboniselo YesiGreenlandic Inconywa KwiTV
NgoJanuwari 2013, iMboniselo yesiGreenlandic ibineminyaka eyi-40 ipapashwa. IsiGreenlandic yenye yelwimi zamaInuit, ibe sithethwa ngabantu abayi-57 000.
EGreenland kukho amaNgqina kaYehova ayi-150, kodwa iMboniselo yesiGreenlandic isasazwa kubantu abayi-2 300. Okutheth’ ukuthi uninzi lwabantu abafunda iNapasuliaq Alapernaarsuiffik, igama leMboniselo yesiGreenlandic, abangawo amaNgqina.
Kudliwano-ndlebe olwenziwe kwiTV, umveleli weofisi yokuguqulela eseNuuk uthi: “Abantu abaninzi baseGreenland banomdla kakhulu eBhayibhileni, ngenxa yoko bayayifunda iNapasuliaq Alapernaarsuiffik.”
Kwakolu dliwano-ndlebe kwabuzwa omnye wabaguquleli ngento ayithandayo ngeMboniselo, wathi: “Ndiye ndazuza xa bendifunda iMboniselo. Ngokomzekelo, indibonise indlela yokuphila ubomi obusempilweni. Ndandikade nditshaya nakuba ndandiqonda ukuba ukutshaya akundenzi ndibe sempilweni. Kodwa iBhayibhile isixelela ukuba, ukuba sifuna ukuba sempilweni, kufuneka sigcine imizimba yethu icocekile.”
Kwakolu dliwano-ndlebe kwachazwa ukuba amaNgqina kaYehova ebeshumayela eGreenland ukususela kwiminyaka yee-1950 ibe kuye kwapapashwa iincwadi neencwadana ezinemifanekiso ngesiGreenlandic. Umsebenzi wokuguqulela wenziwa ngamatsha-ntliziyo amaDanish namaGreenlandic ibe usukelo lwabo kukuba baguqulele ulwimi lwabo ngendlela evakalayo.
Enye indoda ekudala iliNgqina eGreenland yathi: “Kangangeminyaka eyi-25 ndishumayela kubantu abathetha isiGreenlandic ndiye ndakubona ukubaluleka kokuba noncwadi lolwimi lwawo. Kukho iilali esizihambela ngephenyane, iinyanga zibe mbalwa ngonyaka, kuzo kukho abantu abakuthandayo ukufunda iimagazini zethu, kuba singakwazi ukuya rhoqo kubo sibathumelela iileta ezinoncwadi lwethu.”
Ukususela ngoJanuwari 2013, uhlelo lukawonkewonke lweMboniselo yesiGreenlandic beluqala ukuphuma. Ezi Mboniselo ungazifunda uze uzikhuphelele kwindawo ethi “Iimpapasho” ekwiWebhsayithi ethi jw.org/xh uze ukhethe ulwimi lwesiGreenlandic uze ucofe indawo ethi “Khangela”.